Izindawo zakobantu zokuzama impilo ezaphenduka ihlathi losizi - Bayede News
Inkundla Yabantu, Uncategorised
“…Akukho nkululeko ngaphandle kwakho” lawa ngamazwi ombhali wase-Scotland ogama lakhe uFrances Wright. Ukungalingani kuwumbhubhisi omkhulu emazweni ngoba kuyaye kugcine sekulimaza umnotho walelo lizwe.
ENingizimu Afrika emva kweminyaka engaphezu kwama-25 kwatholwa inkululeko naboHlanga baqala bazizwa beyingxenye yezwe, okucacayo yikuthi ngathi izinduku ezazishaya aboHlanga endulo namanje zisabashaya ngoba usizi olwalubakhungethe ngezikhathi zobukoloni kanye nobandlululo lapha eNingizimu Afrika namanje lusabembethe.
Ufuduko kungezinye zezinto ezingakhulisa umnotho wendawo ethize zibe futhi ziwisa owendawo thize.
Iqiniso yikuthi uma abantu besuka ezindaweni zasemakhaya beya emadolobheni nasemalokishini bakhulisa izibalo zalezo zindawo kanye nomnotho wakhona kepha izindawo abazishiyayo zisala dengwane zingenazo izisebenzi ezikhuphula umnotho wazo zisale zibizwa ngalokho ekuthiwa amaGhost Towns.
Lolu fuduko luholela kokubi kanye nasezintweni ezinhle kwabasemalokishini. Kepha okufanele kukhunjulwe wukuthi izindawo zasemalokishini zehlukene kabili ngenxa yokuthi kukhona lezi ezihlelwe uHulumeni bese kuba nalezo ezifakwa yizakhamuzi okuyizindawo eziyimijondolo noma zasemijondolo.
Izimo zenhlalo ezindaweni zasemalokishi azikho zinhle kakhulu ngenxa yezibalo eziphezulu zabantu kanye nokunganakekelwa kwengqalasizinda yazo lezi zindawo. Isibonelo, imigwaqo yezindawo zasemalokishini isimo sayo asikho sihle ayinakiwe inemigodi, le migodi iqiniso yikuthi idalwa ukunganakwa kwayo imigwaqo kanye namanzi ahlezi exhaxhaza emigwaqeni.
Amathemba aboHlanga ngokuzuza inkululeko kwakuwukuthi isimo senhlalo sizoba ngcono kodwa kubukeka siya ngokuya siqhubeka nokuba nzima. Imigwaqo igcwala amanzi axhaxhazayo aphuma emapayipini aqhumile amasonto kanye nezinyanga.
Kuyo futhi le migwaqo kubuye kuxhaxhaze indle okuba yinto engajabulisi uma uyibona njalo ngenxa yokuthi lokho akuyona impilo ngoba indle iletha izifo emiphakathini kepha uthola lokhu kwenzeka ezindawo zakobantu kungathi akuyona ingozi enkulu empilweni yabantu.
Isenzo esihle sokuzama impilo sika‘Magebhula’ sesaphenduka isithombe sosizi kwaboHlanga. Ngonyaka odlule kuzokhumbuleka ukuthi elaboHlanga laloba ngobaba uMnu James “Sofasonke” Mpanza okwaba kuyisenzo sakhe esazala imijondolo eSoweto kodwa esasisihle sesaba isithombe sosizi kwaboHlanga ngenxa yezimo asebephila ngaphansi kwazo.
Kuningi ukukhuluma okukhona mayelana namalokishi kodwa ihlazo eligqitshwayo noma elingakhulunywa ngokuphelele uma kukhulunywa ngalezi zindawo zasemalokishini ukuthi imijondolo iyona esiminingi ukwedlula izindlu emalokishini futhi iyaqhubeka iyakhula isiqala nokudla nasezindaweni ezezinye izinhlanga okugcina kudala izingxabano.
Kwamanye (amalokishi) uma kungathiwa makuvotwe phakathi kwabanezindlu kanye nabahlala emijondolo iqiniso lithi sekunganqoba labo abahlala emijondolo.
Lokhu kuba khona kwemijondolo eminingi kuyashaqisa kodwa okwethusa kakhulu ngaboHlanga abahlala kuyona usizi ababhekene nalo nsuku zaphuma. Lolu sizi olwagcina seluholele noma ekusungulweni kwenhlangano elwela amalungelo abo ebizwa ngokuthi “Abahlali Basemjondolo” nayo ecishe ifane naleyo kaSofasonke eyayibizwa ngeSofasonke Party.
Izibalo zabantu emalokishini ziningi noma ziphezulu kakhulu kodwa okufanele kubukisiswe ukuthi uma sibala izakhamuzi zasemalokishi siyazibala nalezi ezihlala emijondolo esuke izungeze lelo lokishi. Izibalo zezakhamuzi zasemijondolo ziyakhula nsuku zonke okuchaza ukuthi izinkinga zabo nazo ziyanda kanye nabo.
Okuliqiniso ngale mijondolo ukuthi isuke ihlelwe noma ibekwe emhlabeni okungokamasipala okuchaza ukuthi izakhamuzi lezi ezinamakhaya kuwo zisuke zihleli kuleyo ndawo ngokungemthetho okugcina sekuholela ekugquzulaneni kwezakhamuzi kanye namaphoyisa ngenxa yalezi zindawo. AboHlanga abahlala kulezi ndawo bazithola sebedilizelwa imijondolo yabo umasipala ngenxa yokuthi igunya lokuhlala kuleyo ndawo lisuke lingekho futhi umasipala usuke ubeke lezi zindawo njengalezo ezibizwa ngamaGreen Areas.
Lezi zinto eziwumkhonyovu okuthiwa zenziwa ngabahlali basemijondolo zingezinye zezinto ezigcina seziholela ekuxabaneni phakathi kwalabo abahlala emijondolo nabahlala ezindlini.
Imingcele nobuzwe bethu kumele kuvikelwe kakhulu
Lezi zingxabano ziqhamuka uma kunezinkulumo ezithi ukucisha kukagesi ezindaweni zasemalokishi kudalwa ukwanda “kwezinyokanyoka” okuyizintambo zikagesi ezixhunywe ngomgunyathi, ubufakazi balokho ilapho ngonyaka wezi-2016 abahlali baseMayville babhikishela ukufakwa kwezinyoka zabahlali basemjondolo.
Kuyashaqisa izimo aboHlanga abahlala ngaphansi kwazo ezindaweni zasemijondolo ezigcina sezibaphoqa ukuba bafake impilo yabo engcupheni ngenxa yokufuna izidingo eziyisisekelo, ngoba ukufaka izintambo zikagesi ezingekho emthethweni kuyingozi enkulu eminye yalezi zindawo zemijondolo zitholakala onqenqemeni lwemifula okuba yingozi kakhulu uma imvula ina ngamandla.
Lesi sithombe sezindawo zasemijondolo siyethusa kakhulu ngoba leli zwe lineminyaka engama-26 lathola inkululeko kodwa aboHlanga namanje basacindezeleka ngisho sekuphethe uHulumeni wentando yeningi.
Ngisho izindawo zokulondoloza amathambo amalungu emindeni ayibukeki kahle ezindaweni zasemalokishini ngenxa yokulinyazwa kwamatshe amathuna kanye nokuwohloka kwengqalasizinda yokubiya lezi zindawo okwenza kubelula ukuthi izigila mkhuba zingene zenze ezikuthandayo kulezi zindawo.
Isibonelo salokhu kube ukuhlaselwa kweliba likaloyo owayengunozinti weqembu i-Orlando Pirates kanye neqembu lesizwe lakuleli uSenzo Meyiwa lapho ngisho kukhona abaqaphe le ndawo elondoloze lo nozinti kepha ukuwohloka kwengqalasizinda kwashiya intuba okusolakala ukuthi izigilamkhuba zangena ngayo zenza lesi senzo esibi.
Iqiniso lithi lo potsho awukho wodwa futhi akuyona indawo elondoloze uMeyiwa kuphela enentuba yokungena engekho emthethweni..
Isithombe sona sithi izindawo zasemijondolo ziyasilela kakhulu uma kuza kungqalasizinda kanye nezimo zenhlalo kepha nazo lezi uHulumeni azibeka yena noma ezabekwa uHulumeni wobandlululo nazo ziyaqhubeka nokusokola.
Anathi Mtaka Feb 19, 2021